Repoblikan' i Afrika Afovoany - Wikipedia
Repoblikan' i Afrika Afovoany
(tonga teto avy amin'ny Repoblikan'i Afrika Afovoany)
Ny Repoblikan' i Afrika Afovoany dia firenena ao Afrika Afovoany, manana velaran-tany mirefy 623 000 km2 izy, i Bangui no renivohiny. Mamaritra azy ao avaratra i Tsady, ao atsinanana i Sodàna, ao atsimo ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô sy ny Repoblikan' i Kôngô, ary ao andrefana i Kamerona.
Sainam-pirenben' ny Repoblikan' i Afrika Afovoany
Ny Repoblikan' i Afrika Afovoany eo anivon' i Afrika
Tsy manana morontsiraka ity firenena ity fa ahitana renirano maro kosa, ka ny lehibe amin' izany dia i Oubangui, izay manamorona ny sisin-taniny amin' ny Repobika Demôkratikan' i Kôngô, izay azo ifamoivoizana. Lembalemba ny tanin' io firenena io, izay manana haavo eo anelanelan' ny 600 sy 900 m. Rakotra hivoka be ahitra ny tapany avaratra, ny afovoany kosa rakotra hivoka be hazo madinika, ary ny tapany atsimo-atsinanana kosa ahitana ala mikitroka.
Ny ankamaroan’ ny Afrikana Tanivo (60 %) dia manaraka ny fivavahan-drazana afrikana animista, fa ny 35 % kosa Kristiana. Ny ankamaroan' ny mponina dia monina any amin' ny faritra andrefana ka ny 65 % amin' izany monina amin' ny tanàna madinika ambanivohitra.
Sarin-tanin' ny Repoblikan' i Afrika Afovoany
Miakina amin' ny fambolena ny toekaren' ny Repoblikan' i Afrika Afovoany. Manana harena an-kibon' ny tany koa io firenena io ka ny mampidi-bola be indrindra dia ny diamondra izay mametraka an' io firenana io ho anisan' ny mpanondrana diamondra betsaka indrindra. Manondrana hazo sy kafe ary landihazo ko aizy.
Zanatany frantsay taloha ny Repoblikan4 i Afrika Afovoany, fa tamin’ ny taona 1960 izy dia nahazo ny fahaleovan-tenany. Ny fiteny frantsay sy ny fiteny sangô no fiteny ôfisialiny
Afrika Atsimo - Alzeria - Angôla - Benino - Borkina Fasô - Borondy - Bôtsoana - Ejipta - Eritrea - Esoatiny (Soazilandy taloha) - Etiôpia - Gabôna - Gambia - Ganà - Ginea - Ginea Bisao - Ginea Ekoatôrialy - Jibotỳ - Kamerona - Kapvera - Kenia - Kômôro - Kôtidivoara - Lezôtô - Liberia - Libia - Madagasikara - Malaoy - Malỳ - Maorisy - Maoritania - Marôka - Môzambika - Namibia - Nizera - Nizeria - Oganda - Repoblika Arabo Saharaoy Demôkratika - Repoblika Demôkratikan'i Kôngô - Repoblikan' i Afrika Afovoany - Repoblikan'i Kôngô - Roanda - Saô Tôme e Prinsipe - Seisely - Senegaly - Siera Leôna - Sodàna - Sodàna Atsimo - Sômalia - Sômalilandy - Tanzania - Tôgô - Tonizia - Tsady - Zambia - Zimbaboe
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Repoblikan%27_i_Afrika_Afovoany&oldid=1040818"
Dernière modification le 3 Desambra 2021, à 15:22
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 15:22 ity pejy ity.